Howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo la qorsheynayo in laga bilaabo deegaannada maamulka Koonfur galbeed – Radio Muqdisho
Howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo la qorsheynayo in laga bilaabo deegaannada maamulka Koonfur galbeed
Ciidamada xoogda Dalka Soomaaliya iyo kuwa Koofur Galbeed ayaa wada dhaqdhaqaadii ugu dambeeyay oo ay ugu diyaar garoobayaan howlgallo ka dhanka Al Shabaab oo ay ka fulinayaan gobollada Baay, Bakool iyo Shabeelaha Hoose.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Gobolka Baay Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa ku soo waramay in howlgallada laga fulin doono meelo cayiman oo ay ka mid ah deegaannada ay kaga dhuumaaleysanayaan gobollada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose, si dib loo furo waddooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha goboladaasi ku nool.
Guddiga amniga ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa qorsheynaya in ciidamada wada jirka ah la howlgeliyo, si looga hortago dhagarta ay maleegayaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Dhawaan ayay ahayd markii dowlad goboleedka Koonfur galbeed ay sheegtay in dhawan la bilaabi doono howlgallo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, kadib markii tababbaro loo soo xiray ciidamada daraawiishta ee maamulka Koonfur galbeed.
Goobo Ganacsi oo ay leeyihiin Soomaali ayaa Lagu Boobay Magaalada Cape Town
Kulan loogu duceynayay dhallinyaradii ku dhimatay badda oo lagu qabtay xeebta Liido